War saxaafadeed Xasaasi ah oo ay Xildhibaan Caasha Axmed Cabdalle ay ka jeedisay magaalada Newyork
War saxaafadeed Xasaasi ah oo ay Xildhibaan Caasha Axmed Cabdalle ay ka jeedisay magaalada Newyork…
Halkan ka dhegeyso Warsaxaafadeedka Xildhibaanadda...
War saxaafadeedkan xasaasiga ah ayaa waxay xil. Caasha Axmed Cabdalla ugu horeyntii u direysaa tacsi dhalinyaradii ku geeriyootey weerar lagu qaaday magaalada Boosaaso xaafad ka mid ah, waxay kaloo ka hadashay in Cade Muuse, Siciid Raage, iyo Col C/casiis gacmay ay geysteen fal ah (international crime) kaasoo ay dacwad ka xareyn doonto caalamka.
Caasha ayaa sheegtey in weerarkii lagu qaaday xaafada Raf iyo Raaxo ee Boosaaso uu yahay mashaariicda cusub ee Puntland isaga bixineysa lacago 10 million oo doolar ah uu caalamka ku leeyahay, taasoo mashruucaan uu yahay mashruuc dadka laga iibinaaya hay'adaha argagixiso la dirirka ah iyadoo la rabo in lacagaha deynta ah la isaga bixiyo.
Ugu dambeyntii ayaa Xildhibaan Caasha waxay ugu baaqday Cade Muuse uu siidaayo wiilasha dhalinyarada ah ee u xiran dambila'aantana lagu soo xirtey, waxayna caalamka ugu baaqday in ay wax ka qabtaan koontaraktiga ah in dadka la iibsado oo itoobiya laga iibiyo.
Wareysigan ayaa ah mid aad u dheer xasaasina ah ee dhagaysi wanaagsan.